Fomba Fitory Taloha: Radio sy ny Lightbearer
NIARA-NIASA tamin’ny radio iray teto Jakarta ireo rahalahy, tamin’ny 1933. Nalefa tao àry ny lahatenin’i Rutherford tamin’ny teny anglisy. Nisy lahateny tamin’ny teny holandey koa novakina tao amin’ny radio, ary lehilahy iray liana tamin’ny fahamarinana no namaky azy. Nahaliana ny olona izany, ka nitombo ny boky sy gazety voapetraka.
Romotra ny mpitondra fivavahana katolika rehefa nalefan’ny radio ilay lahatenin’i Rutherford hoe “Ireo Vokatra Entin’ny Taona Masina eo Amin’ny Fiadanana sy ny Fanambinana.” * Nampiasa olona izy ireo mba hiampanga ny Rahalahy De Schumaker hoe “mpanendrikendrika sy mpaniratsira ary mpankahala olona.” Izy mantsy no mpanatitra an’ireo raki-peo tany amin’ny radio. Niaro tena i De Schumaker nefa mbola nampandoavina lamandy 25 florins * ihany, ankoatra ny vola lany tany amin’ny fitsarana. Nisy telo ny gazety malaza niresaka an’ilay fitsarana, ka vao mainka izany fitoriana vita ho azy.
Ilay sambo Lightbearer
Tonga teto Jakarta ny sambo Lightbearer (na Mpitondra Fahazavana), tamin’ny 15 Jolay 1935. Mirefy 16 metatra io sambon’ny fandaminana io. Niainga avy any Sydney, any Aostralia, izy io ary nanao dia fitoriana naharitra enim-bolana. Mpitory fito nafana fo no tao, ary vonona hitory eran’i Indonezia sy Singapour ary Malezia izy ireo.
Nitety an’ireo seranan-tsambo teto Indonezia ny mpisava lalana tao amin’ny Lightbearer, nandritra ny roa taona mahery, ary nizara boky sy gazety be dia be. Hoy ny Anabavy Deschamp: Isaky ny niditra seranana kely ry zareo, dia ‘nalefany tamin’ny grafofaonina ny lahatenin’i Rutherford. Gaga be ny mponina tany amin’ny faritra mitokana tany Malezia, rehefa nahita an’ilay sambo ngezabe tonga teo amin’ny seranana sady naheno feo mafy be avy tao. Hoatr’ireny nahita zavatra avy any amin’ny planeta hafa ireny ry zareo!’
Sahy nitory ireo rahalahy ka tezitra be ny mpitondra fivavahana. Noteren’izy ireo ny manam-pahefana mba tsy hamela ny Lightbearer hiditra tany amin’ny seranana maro teto Indonezia. Niverina tany Aostralia àry ilay sambo tamin’ny Desambra 1937. Efa be no vitany tamin’izay.
Ireo rahalahy nandeha tamin’ny Lightbearer
^ feh. 2 Nahariharin’i Rutherford fa tsy marina ny fampianaran’ny Eglizy Katolika, ary tsy mety ilay izy miditra amin’ny politika sy manao raharaham-barotra.
^ feh. 2 Mitovitovy amin’ny 930 000 ariary mahery ankehitriny izany.